The Girl with the Dragon Tattoo (2011) | MM Movie Store
ငယျစဉျကစပွီး ကွမျးတမျးတဲ့ဘဝတဈခုမှာနထေိုငျဖွတျသနျးလာရတဲ့နဂါးရုပျပုံဆေးမငျကွောငျနဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ မိသားစုမရှိအုပျထိနျးသူမရှိပဲ တိုငျးပွညျရဲ့ထောကျပံမှုနဲ့ ဘဝကိုဆိုးပတေရေငျး ဖွတျသနျးနခေဲ့ပွီးတဈဖကျမှာတော့သူဟာ ထကျမွကျတဲ့စုံစမျးရေးစိတျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အလှတျစုံထောကျတဈဦးဖွဈပါတယျ
ဂြာနယျလဈမီကယျဘလှနျးကဈအဖွဈ သရုပျဆောငျထားတဲဂြိမျးဈဘှနျးမငျးသား ဒနျနီယယျခရိတျ ကတော့ဒီဇာတျလမျးမှာနိုငျငံရဲ့အကွီးမားဆုံးငှကွေေးအလှဲသုံးစားလုပျမှုကိုသကျသမေခိုငျပဲဖျောထုတျမိလို့အသရဖေကျြမှုနဲ့ရငျဆိုငျနရေသူတဈဦးဖွဈပါတယျ
ကြှနျးတဈကြှနျးပျေါမှာနထေိုငျတဲ့ဆှီဒငျရဲ့အခမျြးသာဆုံးမိသားစုတဈခုက သူဋ်ဌေးကွီးတဈယောကျဟာလှနျခဲ့တဲ့အနှဈ၄၀ကဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လကျသညျမပျေါခဲ့တဲ့မိသားစုအတှငျးလူသတျမှုတဈခုကိုသူ့ဘဝလကျကနျြအခြိနျတှမှောအဖွသေိရဖို့မီကယျဘလှနျးကဈကိုငွငျးဆနျလို့မရတဲ့ကမျးလှမျးမှုနဲ့အဖွရှောပေးဖို့ ကမျးလှမျးလိုကျပါတော့တယျ
ထိုအမှုဟာ ဘလှနျးကဈရဲ့ဂုဏျသိက်ခာကိုပွနျလညျဆယျယူဖို့တိုငျးပွညျရဲ့အကွီးမားဆုံး ငှကွေေးအလှဲသုံးစားလုပျမှုတို့နဲ့ ပတျသကျနခေဲ့ပွီးဘလှနျးကဈနဲ့အတူ နဂါးရုပျဆေးမငျကွောငျနဲ့မိနျးကလေးပါစုံစမျးရေးထဲကို ပါဝငျလာတဲ့အခါမှာတော့….
Millennium Trilogy ရဲ့အောငျမွငျခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဝတ်တု ဖွဈတဲ့The girl with the dragon tattoo ဝတ်တု ကိုရုပျရှငျအဖွဈပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ဒီဇာတျကားဟာလညျးအောငျမွငျခဲ့ပွီး IMDb7.8နဲ့ RT86%ရရှိထားတဲ့crime flim အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ
actionခနျးတှပေါဝငျမှုနညျးပွီးaction ဇာတျလမျး ကွိုကျသူတှေ မကွညျ့သငျ့တဲ့ရုပျရှငျမြိုး ဖွဈပါတယျ18+အခနျးတဈခြို့လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကွမျးတမျးတဲ့ဇာတျဝငျခနျးတခြို့ ပါဝငျပါတယျတဈစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ရငျး တှေးတောရတာကို ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျCrime flimတဈခုကပေးစှမျးတဲ့ ရသကိုအပွညျ့အဝ ပေးစှမျးစမှောပဲဖွဈပါတယျ…
ငယ်စဉ်ကစပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနေထိုင်ဖြတ်သန်းလာရတဲ့နဂါးရုပ်ပုံဆေးမင်ကြောင်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မိသားစုမရှိအုပ်ထိန်းသူမရှိပဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ထောက်ပံမှုနဲ့ ဘဝကိုဆိုးပေတေရင်း ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့သူဟာ ထက်မြက်တဲ့စုံစမ်းရေးစိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အလွတ်စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
ဂျာနယ်လစ်မီကယ်ဘလွန်းကစ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသား ဒန်နီယယ်ခရိတ် ကတော့ဒီဇာတ်လမ်းမှာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုကိုသက်သေမခိုင်ပဲဖော်ထုတ်မိလို့အသရေဖျက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဆွီဒင်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစုတစ်ခုက သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ယောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၄၀ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လက်သည်မပေါ်ခဲ့တဲ့မိသားစုအတွင်းလူသတ်မှုတစ်ခုကိုသူ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်တွေမှာအဖြေသိရဖို့မီကယ်ဘလွန်းကစ်ကိုငြင်းဆန်လို့မရတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့အဖြေရှာပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်
ထိုအမှုဟာ ဘလွန်းကစ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်ဆယ်ယူဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးမားဆုံး ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတို့နဲ့ ပတ်သက်နေခဲ့ပြီးဘလွန်းကစ်နဲ့အတူ နဂါးရုပ်ဆေးမင်ကြောင်နဲ့မိန်းကလေးပါစုံစမ်းရေးထဲကို ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့….
Millennium Trilogy ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဝတ္တု ဖြစ်တဲ့The girl with the dragon tattoo ဝတ္တု ကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး IMDb7.8နဲ့ RT86%ရရှိထားတဲ့crime flim အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်
actionခန်းတွေပါဝင်မှုနည်းပြီးaction ဇာတ်လမ်း ကြိုက်သူတွေ မကြည့်သင့်တဲ့ရုပ်ရှင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်18+အခန်းတစ်ချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့ ပါဝင်ပါတယ်တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း တွေးတောရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်Crime flimတစ်ခုကပေးစွမ်းတဲ့ ရသကိုအပြည့်အဝ ပေးစွမ်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…